Na Ekpochapu Ikpo ọkụ Tubes China Manufacturers & Suppliers & Factory
Na Ekpochapu Ikpo ọkụ Tubes - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Na Ekpochapu Ikpo ọkụ Tubes)
N'okpuru tank kpụ ọkụ n'ọnụ maka ngwaahịa reptile
Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: ahaziri aha elekere: 16w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba: nwa, ahaziri oge ndu: ụbọchị 30 Ebube n'okpuru ebe a na-ekpuchi tank Ezigbo ihe eji eme nri, amphibian, obere ụmụ anụmanụ ma ọ bụ osisi terrariums. Ndozi akụkụ nrapado na-ejide onwe gị na...
Onye Na-eme Ka Okpomọkụ Na-ekpo ọkụ na-emepụta ọkụ
Nkọwapụta ngwaahịa Pet Na-ekpo ọkụ Okpomọkụ Na Okpomọkụ Na-achịkwa zuru waterproof, amphibious. Enwere ike ịgbachi agba, dị mfe ihichapụ ebe dị ọcha. Debe ụdọ ike, gbochie anụ ma ọ bụ dọta ya. Ọ bụ ihe kacha mma anụ ọkụ kpo oku mkpuchi ngwaahịa. Ojiji zuru oke: enwere ike iji ya kpoo anụ ahụ, kpoo na nkịta dị ọkụ,...
Na Ekpochapu Ikpo ọkụ Tubes Na-ekpochapu ikpo ọkụ tubes Kpochapu ihe nkiri na-ekpo ọkụ saa Egwuregwu kpochapu ọkụ Nkịtị Na-ekpo Ekpo na-ekpo ọkụ maka Gutters Aka na-ekpo ọkụ aka Ugbo oku na-ekpo ọkụ Aka kpochapụ obere Ngwa